Soomaalida YEMEN kasoo laabtay ee Soogaartay Boosaasooo oo daruuf adag Kamuuqato +Sawirro | Wardoon Wardoon.net - Somali News
Soomaalida YEMEN kasoo laabtay ee Soogaartay Boosaasooo oo daruuf adag Kamuuqato +Sawirro
Waxaa xalay Dekada Magaalada Boosaaso ee Xarunta Gobolka Bari kusoo xirtay Markabka Nawal 3 oo siday in ka badan 2,550-qof oo qaxooti Soomaaliyeed ah kuwaa oo kasoo baxsaday colaada ka aloosan Dalka Yaman.
Markabka ayaa dadkan uu kasoo qaaday Dalka Yaman si lacag la’aan ah ku keenay Dekada Magaalada Boosaaso, waxaana Markabkan bad baadinta qaxootiga Soomaaliyeed ee kasoo baxsanaya Colaada Yaman ugu tala galay Milkiilaha Markabkaasi Cabdi Cali Faarax.
Qaxootiga Soomaaliyeed ee saarnaa Markabka Nawaal 3 oo u badnaa Haween, Caruur , iyo dad da’ ah waxaa saakay markii Markabka laga soo dajiyay Dekada Magaalada Boosasao kusoo dhaweeyay masuuliyiin katirsan Maamulka Puntiland iyo qeybaha kala duwan bulshada ku dhaqan Magaaladaasi.
Gudoomiyaha gobalka Bari Yuusuf Maxamed Waceys Dhedo oo kamid ahaa Masuuliyiinta maanta qaxootiga Soomaaliyeed kusoo dhaweeyay Dekada Boosaaso ayaa sheegay in Puntiland horey usoo dhaweesay qaxooti badan iminkana ay diyaar u yihiin soo dhaweynta Qaxootigan maanta Boosaaso soo gaaray.
Qaxootigii Markabka saarnaa ayaa intii ay safarka kusoo jireen waxaa caawimaad u fidiyay shaqaalaha Markabka oo horey usii qaaday raashin ,biyo iyo daawooyin, waxaana dadkii saarnaa Markabka Nawaal 3 ay si weyn ugu duceeyeen Ganacsadaha Markabkaasi iska leh Cabdi Cali Faarax oo ugu tala galay in Qaxootiga Soomaaliyeed ee Yaman ku dhubaateesan lagu soo daad gureeyo.